कोरोना भाइरसको संक्रमण मोटो व्यक्तिमा झनै बढी खतरनाक ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारकोरोना भाइरसको संक्रमण मोटो व्यक्तिमा झनै बढी खतरनाक ?
३१ बैशाख २०७७, बुधबार ०८:२७ प्रकाशित
तौल धेरै हुने ब्यक्तिको शरीरमा रगतसम्म अक्सिजन पु¥याउन गाह्रो हुन्छ र रगतको प्रवाह राम्रोसंग नभएपछि मुटुमा असर पुग्छ ।यूनिभर्सिटी अफ ग्लासगोका प्रोफेसर नविद सत्तारले बढी तौल भएको मान्छेलाई धेरै अक्सिजनको आवश्याक पर्ने भन्दै यसले मानिसको शरीरमा धेरै तनाव हुने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरा त्यस्तो व्यक्तिमा हुन सक्ने जनाइएको छ ।
वैज्ञानिकले कोशिकाहरुमा रहेको दुई वटा एन्जाइमहरु कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्ने मुख्य बाटो रहेको जनाएका छन् । यो एन्जाइम मोटो मानिसहरुको सेलमा ठूलो मात्रामा फैलिएको हुन्छ ।त्यसैले जसको धेरै तौल छ तिनीहरुमा फ्याट सेल हुन्छ र तिनीहरु कोरोनाको संक्रमित हुने खतरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।